दाह्री पाल्दा र पछ्यौरी ओढ्दा जेलमा ! - Sabal Post
एजेन्सी – चीनमा मानव अधिकार चरम उल्लंघन भएको खुलासा भएको छ । बीबीसीले सार्वजनिक गरेको १ सय ३७ पृष्टको दस्ताबेजमा मानिसहरुलाई दाह्री पालेको, पछ्यौरा ओढेको (नकाव लगाएको) तथा इन्टरनेट चलाएको आधारमा समेत थुनिएको उल्लेख छ । सो दस्ताबेजको पाँच सय ९८ औँ लहरमा पहिलो नाम हेलसेम भएको एक ३८ वर्षीया महिलालाई केही वर्षअघि नकाब लगाएको कारण मुद्दा चलाएर पुनर्शिक्षण शिविरमा पठाइएको उल्लेख छ । यस्तै दस्ताबेजको २३९ औँ लहरमा नुरमेमेत नाम गरेका २८ वर्षीय पुरुषलाई एउटा वेब लिङ्कमा क्लिक गरेबापत थुनिएको उल्लेख छ ।
मानव अधिकार उल्लंघनसँग मिल्ने विभिन्न प्रमाणहरुलाई बीबीसीले सो दस्ताबेजका १७९ औँ, ३१५ औँ र ३४५ औँ लहरको बिश्लेषण गरेको छ । जहाँ नकाव लगाएकोदेखि दाह्री पालेको र इन्टरनेट चलाएकोसम्मका आरोपमा मानिसहरु थुनिएका छन । त्यसरी थुनिएका मानिसहरु अधिकांश मुस्लिम छन ।
भबिष्य निर्धारण गरिने भन्दै हजारौं मुस्लिमहरूलाई शिविरहरूमा राखिएको छ । पश्चिमी क्षेत्र सिन्जियाङका तीन हजारभन्दा बढी व्यक्तिका सूचिकृत गरिएका विवरणहरूमा दैनिक जीवनका अति व्यक्तिगत कुराहरू समेत समेटिएको छ । दस्तावेजमा मानिसहरूले गर्ने प्रार्थना गर्ने , लुगा लगाउँने, उनिहरुले गर्ने भेटघाट र परिवारका सदस्यले गर्ने व्यवहारसम्मका विवरण समेटिएका छन्।
आतङ्कवाद र धार्मिक अतिवादसँग लडिरहेको भन्दै चीनले कुनै गलत काम नगरेको बताउने गरेको छ। तर चुहावट भएको चीनको यो दस्तावेजमा वास्तविकता झल्किएको विज्ञहरुले बताएका छ । सिन्जियाङमा चिनियाँ नीति बारेका अग्रणी विज्ञ डा. एन्ड्रिआन जेन्जले भने, ‘यो महत्त्वपूर्ण दस्तावेज परम्परागत धार्मिक अभ्यासहरूलाई दबाउन र दण्डित गर्न बेइजिङ कति सक्रियताका साथ लागिपरेको छ भन्ने कुराको आजको मितिसम्म मैले देखेको सबैभन्दा बलियो प्रमाण हो।’ ‘नम्बर फोर ट्रेनिङ सेन्टर’ भनेर उल्लेख गरिएको एउटा शिविरलाई जेन्जले पनि पहिचान गरेका छन्। चिनियाँ अधिकारीहरूले गत वर्षको मे महिनामा बीबीसीलाई भ्रमण गराएका शिविरमध्ये त्यो एउटा हो।
बीबीसीको टोलीले ल्याएका धेरै प्रमाणहरूलाई नयाँ दस्तावेजले पुष्टि गरेको छ, त्यसमा समावेश गरिएका मानिसहरूको गोपनीयता कायम राख्न प्रकाशनका लागि केही सम्पादन गरिएको छ। तीन सय ११ जना व्यक्तिमाथि चलाइएको अनुसन्धानका विस्तृत विवरण त्यसमा छ। त्यसमा उनीहरूको पृष्ठभूमि, धार्मिक चालचलन तथा सयौँ आफन्त, छिमेकी र साथीहरूसँगको सम्बन्धबारे विवरण रहेका छन्।
भगवान श्री रामकी दिदी को थिईन ?
पार्टी कार्यालयमा नै महासमिति बैठक बस्ने :…
भएको बजेट पनि खर्च गर्न सक्दैन प्रदेश…
शरीर जोडीएका जुम्ल्याहा वालीका जन्मीए
नेकपाका स्थानीय नेता कार्यकर्ता काँग्रेसमा प्रवेस